बलात्कारको उपचार ः कडा कानुन र मानसिक नियन्त्रण | चितवन पोष्ट दैनिक
बलात्कारको उपचार ः कडा कानुन र मानसिक नियन्त्रण
२०७१ चैत्र ५, बिहीबार ०१:३५ गते
यो साता नेपालका प्रायः
सबै सञ्चारमाध्यमहरुमा बलात्कार–सम्बन्धी समाचार र यस कुकर्मविरूद्धका आवाजहरुले प्रमुख स्थान पाए । सबैभन्दा चर्चा एउटी सानी नानी पूजा शाह जसले आठौँ वसन्त पनि देखेकी थिइनन्, एउटा मानव शरीर भएको राक्षसको शिकार भइन् । अर्थात्, तिनलाई २८ वर्षे पुरूषले रक्सीको नशाका कारण बलात्कार ग¥यो । मरणासन्न अवस्थामा फ्याँकेर भाग्यो । उपचारका क्रममा ती बालिकाको ज्यान गयो । नेपालको बारा जिल्लामा भएको यो भयानक मानवताविरोधी अपराधले आज पनि चर्चा पाइरहेको छ । चर्चा यो मानेमा भइरहेको छ कि यस्तो भयानक अपराध गर्नेहरुलाई पचास वर्षअगाडि तोकिएको सजाय काफी छ वा छैन ! बोल्ने मानवअधिकारकर्मी र लेख्ने लेखकहरु प्रायः सबैले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिरहेका छन् । केहीले आजीवन कारावास सजाय दिन ठीक हुन्छ भनिरहेका छन् भने केहीले इन्जेक्सन दिएर सधैँभरिका लागि नपुंसक बनाउन उचित हुन्छ भनिरहेका छन् । लेख्ने र बोल्नेहरुको भावनाको कुरा अलग हो ।
कानुन राज्यले निर्माण गर्छ । कानुन निर्माण गर्दा राज्यले धेरै विषय र परिस्थितिलाई आधार मानेर कानुन निर्माण गर्दछ । यसपटक पूजा शाह बलात्कार र हत्या प्रकरणले नयाँ संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रहेको मुलुकमा केही न केही नयाँ कानुन पक्का निर्माण गर्नेछ । पुरानो ऐनलाई पक्कै पनि संशोधन गर्ने छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । किन पनि त्यो खालको अनुमान लगाउन सकिन्छ भने पहिलेको कानुनमा बलात्कारीलाई सजायभन्दा ज्यादा उसैको मानवअधिकार ज्यादा सुरक्षित गरिएको अवस्था थियो, जुन अवस्थालाई यतिबेला कानुनमा देखिएको कमजोरीका रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । एकातिर बलात्कारीलाई सजाय पनि भन्ने, अर्कोतिर मानवअधिकार पनि भन्ने गर्दा बलात्कारीहरुलाई निरूत्साहित गर्नेभन्दा निर्धक्क बलात्कारका लागि प्रोत्साहन मिलेको थियो । इज्जत जान्छ भन्ने नाममा गुपचुप राख्ने, जे भयो–भयो भन्ने नाममा मिलापत्र गर्ने, पैसा दिएर पीडितलाई चित्त बुझाउने, पैसा खर्च गरेर कानुनी सहायता लिन पाउने र त्यसैका बलमा बलात्कारीले छूट पाउनेजस्ता कारणले बलात्कारीहरु हौसिन्थे र बलात्कार गर्न अघि बढ्थे । यो अवस्था बदल्न पर्ने अवस्था सबैले महसुस गरिसकेको हुँदा आउने दिनमा बलात्कारीविरूद्ध निकै कडा सजाय हुने कुरा पक्का छ । यति भइकन यो बलात्कार भन्ने विषय मानवजीवन सञ्चालन गर्ने मानसिक अवस्थासँग सरोकार राख्ने हुनाले बलात्कार र बलात्कारी अनि पीडितबारे केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, ताकि भोलिका दिनमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध कम हुँदै जाओस् र यसबारे विस्तृत रुपमा जानकारी नभएकाहरुलाई समेत जानकारी मिल्न सकोस् ।
सम्भोग, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, जीउ मास्ने बेच्नेजस्ता नेपालमा प्रचलित शब्दहरुको निष्कर्ष हो, “सेक्सद्वारा मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया वा प्रयास ।” सम्भोगलाई विवाहमार्फत वैधानिकता दिइन्छ । कुनै पनि रीतिरिवाज–अनुसार गरिने विवाहपश्चात् पुरूष र महिला जसलाई नेपालीमा लोग्ने÷स्वास्नी वा श्रीमान्÷श्रीमती भन्ने गरिएको छ, यो जोडीले निर्धक्कसाथ सम्भोग कार्य गर्न सक्छन् । सम्भोगलाई कानुनमा यो वा त्यो नाम दिएर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छैन । कुनै पनि कानुन र ऐन बनाएर सम्भोगबारे चर्चा गरिँदैन, किनकि सम्भोगलाई बिनाव्याख्याको कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ । सम्भोग राजीखुशीमा हुन्छ, जबर्जस्तीमा हुँदैन । जबर्जस्ती, कसैको इच्छाविपरीत सम्भोग गरिन्छ भने त्यसलाई बलात्कार भनिन्छ । वेश्यावृत्तिलाई हिजोआज जीउ
मास्ने बेच्ने नाम दिइएको छ र यो खालको कर्म गर्ने गराउनेलाई पनि नेपालमा दण्डनीय कार्यका रुपमा राखिएको छ ।
वेश्यावृत्ति गर्ने गराउने कार्यमा नगद वा जिन्सीको लेनदेन हुने गरेको छ । एक पक्षले शरीरका केही खासखास अंग सीमित समयका लागि भाडामा दिने र अर्को पक्षले उपभोग गर्ने प्रक्रिया वेश्यावृत्ति
हो । वेश्यावृत्तिमा सम्भोगबाट नअघाएका महिला र पुरूषहरुको संलग्नता हुन्छ । यो खालको कर्म पनि नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि हुने गरेको छ । कुनै देशमा वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता मिलेको छ । धेरैजसो मुलुकमा वेश्यावृत्तिलाई कानुनद्वारा निषेध गरिएको छ । वेश्यावृत्ति संसारको सबैभन्दा पुरानो पेसा भएको हुँदा जतिसुकै कडा कानुन निर्माण गरेर रोक्ने प्रयास गरे पनि संसारका कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रुपले सफल हुन सकेका छैनन् । यो सत्य महसुस गरेरै हुनुपर्छ, केही मुलुकले वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिएर कर उठाउने गरेका छन् । नेपालमा यदाकदा वेश्यावृत्तिलाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने खालका मधुरो र मसिनो आवाज उठ्ने गरे पनि नेपाल सरकारले वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । सायद्, त्यो खालको पश्चिमा छाडा
प्रवृत्तिको पक्षमा नेपाली जनता नभएको हुँदा नेपाल सरकारले त्यो छूट दिने सम्भावना देखिँदैन । चर्चाको केन्द्रबिन्दु बलात्कार हो । यही विषयलाई अघि बढाउन सान्दर्भिक हुन्छ ।
बलात्कार भन्ने शब्द निर्माण हुनुअघिदेखि नै मानवसमाजमा बलात्कार हुँदै आएको हो । राष्ट्रनिर्माण भएर आवश्यकता–अनुसार मुलुकलाई सभ्य र प्रक्रियागत रुपले चलाउनका लागि कानुन निर्माण गर्ने चलन चलाइएदेखि बिस्तारै–बिस्तारै जबर्जस्तीको सम्भोगलाई बन्देज लगाइयो । शरीरका अंग छोप्नका लागि विभिन्न नाम र आकारप्रकारका कपडा बन्नुअघि पनि संसारमा मान्छेहरु थिए । इच्छाअनुसार जसले जसलाई जतिबेला मन लागे पनि उतिबेला सम्भोग गर्थे, बलात्कार पनि गर्थे । सम्भोगलाई सम्भोग र बलात्कारलाई पनि मौन भाषाअन्तर्गत सम्भोगमा राखिएको थियो । मानव संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो । चेतना बढ्दै गयो । मानव चेतनाले नै जबर्जस्तीको सम्भोग मानवहितमा नहुने ठहर गरेपछि डरत्रास देखाएर वा नैतिक बन्धन तेस्र्याएर जबर्जस्तीको सम्भोगलाई बन्देज गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । अर्थात्, बलात्कारलाई सजायको दायरामा समेटियो । फेरि यतिबेला मानिसहरुका बीचमा किन बलात्कार हुन्छ भन्ने प्रश्नले छलफल र बहसको माग गरिरहेको छ ।
एकातिर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई निस्तेज पार्न कानुनलाई कडा पार्ने विषयमा अभिमतहरु बाहिर आएका छन् भने बलात्कार दण्डनीय कार्य हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि किन समाजमा ६ वर्षे बालिका बलात्कृत हुन्छिन् ? ७५ वर्षे कटिसकेकी हजुरआमा किन बलात्कृत हुन्छिन् वा ८० वर्षका हजुरबाले किन आफ्नी नातिनीलाई बलात्कार गर्छन् जस्ता प्रश्नहरुले सही जवाफ खोजिरहेका छन् । जवाफ दिने प्रयत्नभन्दा ज्यादा बलात्कारीलाई फाँसी दिने कि
नदिने ? यतिबेला बलात्कारीलाई दिइने सजाय पर्याप्त छ वा थप गर्नुपर्छजस्ता एकपक्षीय शीर्षकमा केन्द्रित भएको हुँदा मूल जडका रुपमा खोजिनु पर्ने कारणलाई यहाँ खोतल्न उपयुक्त ठानिएको छ ।
सम्भोगको चाहना स्वस्थ शरीरवाला उमेर पुगेका मान्छेहरुमा पलाउँछ । सम्भोगविज्ञहरुका अनुसार १४ वर्ष कटेपछि सम्भोगसम्बन्धी चाहना र हाउभाउ उब्जिन्छ र शरीर स्वस्थ रहँदासम्म पुरूष सम्भोगका लागि ८०÷८५ वर्षसम्म क्रियाशील रहन्छन् भने महिला ६५÷७० सम्म क्रियाशील रहन सक्छन् । सम्भोगका लागि पहिले मानिसको मनमा इच्छा पलाउँछ । इच्छा पलाउनका लागि सबैभन्दा पहिले विपरीत लिंग देखिनु पर्छ, अर्थात् कुनै पुरूषमा महिलालाई देखेपछि वा महिलाले पुरूषलाई देखेपछि मात्रै सम्भोगको चाहना पलाउने हुन्छ । संसारका बिरलै मान्छेलाई विपरीत लिंगको अनुपस्थितिमा सम्भोग चाहना पलाउँछ । विपरीत लिंगको उपस्थिति भएपछि पलाएको सम्भोग चाहना पूरा गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले अनेक उपाय रच्न थाल्छ । एउटा कोणबाट व्याख्या गर्दा विपरीत लिंगलाई देखेर मनमनै सम्भोग–क्रिया पनि गर्छ, अर्थात् पहिले मनमनै बलात्कार गर्छ । मनमनै गरिएको बलात्कारले बलात्कारीको सम्भोग चाहना पूरा हुँदैन । भौतिक रुपले नै सम्भोग गर्ने चाहना जतिबेला पनि मनमा सँगालिरहेको हुन्छ । यसका लागि विपरीत लिंगीलाई मनाउन फकाउने प्रयात्न गर्छ । यो तरिकाले सफलता हासिल नहुँदा जबर्जस्ती सम्भोग गर्नतर्फ लाग्छ । सम्भोगको इच्छा पूरा गर्न यही पाराले बलात्कार गर्छ ।
बलात्कार कानुनी रुपमा दण्डनीय भएको थाहा नभएर बलात्कारीले बलात्कार गर्ने होइन, बलात्कारका बखत एक किसिमले होस गुम्ने हुँदा बलात्कार गर्छ र होस फर्किएपछि इज्जत र कानुनदेखि डराएर सकेसम्म विपरीत लिंगीलाई मार्ने, भाग्ने वा उस्तै परे इज्जत गुम्ने भयले आफैँ आत्महत्यासम्म गर्ने हुन्छन् । अनुसन्धानकर्ताहरुले सम्भोग र बलात्कारबारे गरेका विभिन्न अनुसन्धानहरुले यही बताएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि स्वस्थ शरीरवाला महिला वा पुरूषका अगाडि विपरीत लिंगीको उपस्थितिले सम्भोग चाहनालाई तुरून्त सिर्जना गर्ने हुँदा चेतना कम भएको, इज्जत र नैतिकताको मह¤वबारे जानकार नभएको, जिउने चाहना नै कम भएको वा बाँचेर के पो गर्न सकिएला र भन्ने हीन भावनाबाट ग्रसित महिला वा पुरूषले कुनै पनि बेला विपरीत लिंगीलाई बलात्कार गर्न सक्ने देखिन्छ । यस्ता अवस्थालाई प्रमाण मानेर बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय तोक्ने हो भने बलात्कार कम हुने
छ । आजीवन जेल सजाय तोक्ने हो भने पनि महिला वा पुरूषहरु साँझ–बिहान हिँडडुल गर्न सजिलै सक्ने छन् । बलात्कारीलाई इन्जेक्सनमार्फत नपुंसक बनाउने कानुन ल्याउने हो भने पनि बलात्कारको घटना कम हुने छ, तर सम्पूर्ण रुपले बलात्कार घटनाको अन्त्यचाहिँ हुनेछैन । किन पनि हुनेछैन भने बलात्कार गर्ने अवस्था भनेको पागलपनको अवस्था हो ।
मानव मस्तिष्कलाई अध्ययन गर्नेहरुले भनेका छन्, “कुनै पनि मानिसको दिमाग कुनै पनि बेला गोलमाल हुन सक्छ ।” यसको अर्थ हो, कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि अर्को विपरीत लिंगीलाई कुनै पनि बेला बलात्कार गर्न सक्छ । यो सम्भावना सधैँभरि रहन्छ, तर यति भइकन हरेक मान्छे हरेक मान्छेबाट जोगिने र सतर्क हुने प्रयास भने सधैँ गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ । सत्य यही हो, आज निकै भलाद्मी र इज्जतदार देखिएका, मानिएका महिला र पुरूष नै भोलि बलात्कारीका रुपमा प्रकट हुन
सक्छन् । फेरि पनि दोहो¥याउन उपयुक्त हुन्छ कि कुनै पनि मान्छेको दिमाग कुनै पनि बेला गोलमाल हुन सक्छ । त्यसकारण, बलात्कारबाट जोगिन र जोगाउन नैतिक शिक्षा, कडा कानुन, सामाजिक परिवेश आदि सबैलाई परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । कडा कानुनले डर सिर्जना गर्छ । डर मनलाई नियन्त्रण गर्ने ब्रेक हो । ब्रेक खुकुलो हुँदा गाडी दुर्घटना भएजस्तै मनलाई नियन्त्रण गर्ने ब्रेकरुपी कानुनलाई भने कडा बनाउनैपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ । यस्ता उपाय अपनाउन सके बलात्कार कम हुन सक्छ । होइन भने, बलात्कृत हुने पालो जोकसैको पनि आउन सक्छ । सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड होसियार !